Mobile dị Ebe a. Saịtị gị abụghị. | Martech Zone
Mobile dị Ebe a. Saịtị gị abụghị.
Fraịde, Ọktọba 7, 2011 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Anyị gbara ngagharị anyị n’izu gara aga wee jụọ ole ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ gị kachasị maka ikiri ekwentị. Nke anyi Ntuli aka Zoomerang Nsonaazụ bụ 50/50 kewaa… ọkara n'ime gị nwere saịtị ụlọ ọrụ ndị dị njikere maka nlele mkpanaka ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ahụ. Nke ahụ bụ ọnụ ọgụgụ dị mwute.
Ọ bụ ọnụ ọgụgụ dị mwute n'ihi na ntanetị weebụ bụ ugbua ebe a. Comscore weputara data na 48% nke ndị ọrụ ekwentị ekwentị nde 112 nke America ugbu a na-eji ngwaọrụ ha mgbe niile iji nweta ọdịnaya mgbasa ozi, ewezuga olu ma ọ bụ ederede na na ọ gafere 50% site na njedebe nke afọ.
Nnukwu saịtị na-akọ otu ọkpụrụkpụ akụkụ nke okporo ụzọ ha na-abịa site na mkpanaka: New York Times na-enweta 7.6%, USA Taa na-enweta 10% na LA Times na-enweta 11.2%. Ebe nrụọrụ weebụ na-elekọta mmadụ na-ahụ ọbụna ka ukwuu, banyere 12.5%… na ndị na-agụ akwụkwọ na-anọkarị 2.8 ugboro!
Anyị biputere ọkwa na nso nso a nke enyere Wayszọ 10 iji bipụta ọdịnaya saịtị gị na ekwentị mkpanaaka. Ọ naghị achọ ka sistemụ njikwa ọdịnaya gị dị njikere n'agbanyeghị na nke ahụ bụ azịza kachasị mma.
Ndị enyi anyị Marketpath akwalitela ekwentị ha n'oge na-adịghị anya onyinye, na-ekwu:
Mepụta ụdị mkpanaka nke ebe nrụọrụ weebụ gị na-enye ndị na-ege gị ntị azịza nke na-egbo mkpa ha, nke dị nnọọ iche karịa mkpa nke ọdịnala kọmputa ma ọ bụ ndị ọrụ ntanetị. Ndị na-eji ekwentị ịntanetị achọ ebe nrụọrụ weebụ dị mfe, ngwa ngwa, ma dị mfe ịnyagharịa, na-enye ọdịnaya dị mkpa maka onye ọrụ mkpanaka.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na onye na-eweta ọrụ ngwanrọ nke na-enweghị ụzọ nke ilele ọdịnaya gị nke ọma na ngwaọrụ mkpanaka, ị na-etinyerịrị okporo ụzọ gị n'ihe egwu dị egwu. Ọ na-eju m anya na ọtụtụ sistemụ dị ebe ahụ nke na-amalitebeghị ịzụlite mpempe akwụkwọ mkpanaka, na-echetaghị ihu igwe kachasị mma.
Econsultancy na-ewepụta B2B Content Marketing Guide
Ọkt 7, 2011 na 1:49 AM
M na-ekpo ọkụ cuz M mobile! Cu bụghị cuz gị! Nke a bụ ihe kpatara, nke a bụ ihe kpatara, nke a bụ ihe kpatara m ji ekpo ọkụ!